စမတ်ဖုန်း User တွေ တွေ့ရတတ်တဲ့အခက်အခဲတွေကို Galaxy Note စီးရီးသစ်တွေက ဖြေရှင်းပေးနိုင်မလား?? – DigitalTimes.com.mm
နှစ်စဉ်ဒီလိုအချိန်ကတော့ နာမည်ကြီး Flagship ဖုန်းတွေထွက်လာတတ်တဲ့အချိန်ပါ။ အနီးကပ်ဆုံးအချိန်ကိုပြောရရင်တော့ Samsung ရဲ့ Note Series အသစ် ထွက်တော့မယ့်အချိန်ပေါ့။ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၉ရက်နေ့မှာ ထွက်လာတော့မယ့် Galaxy Note စီးရီးသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောကြတဲ့ ကောလဟလသတင်းတွေကလည်း အများကြီးပါပဲ။ ဒါတွေအပြင်ကို Samsung ကိုယ်တိုင် အမြည်းအနေနဲ့ သဲလွန်စပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေလည်း ထွက်ပြီးသားဆိုတော့ Galaxy Note စီးရီးသစ်တွေကို ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးထားမလဲဆိုတာ တော်တော်ကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပါပြီ။
စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ လူတွေနဲ့ တစ်သားတည်းကျနေတဲ့ အခုခေတ်မှာ စမတ်ဖုန်းမရှိရင် အလုပ်မတွင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဖုန်းကောင်းကောင်းတစ်လုံးရှိဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ တစ်နေ့တာရဲ့အလုပ်တွေဖြေရှင်းပေးတယ်၊ အပန်းပြေစေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ စွမ်းဆောင်ရည်သာညံ့နေရင် စိတ်အနှောင့်အယှက်ပါဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ဖို့ ရှိရမယ့်အဓိကအချက်တွေကို အရင်ကြည့်ရအောင်.
ဖုန်းကောင်းကောင်းတစ်လုံးအနေနဲ့ ရှိသင့်တဲ့တစ်ချက်က တစ်နေ့လုံး အေးဆေးသုံးလို့ရအောင်ထိ အားကြာကြာခံဖို့ပါပဲ။ Samsung ကတော့ လာမယ့်ဖုန်းအသစ်တွေက တစ်နေ့ကုန်ကောင်းကောင်းအသုံးခံမယ်လို့ သဲလွန်စပေးထားတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ Battery Lifetime နဲ့ပတ်သက်ပြီး တော်တော်လေးမျှော်လင့်မိပါတယ်။
ဒါ့ပြင် Storage နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေကင်းဝေးသွားမယ်လို့ သဲလွန်စပေးထားတာကတော့ နည်းနည်လေး ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားပါပြီ။ Storage ပမာဏပဲ ပိုများလာမှာလား ဒါဆိုရင်တော့ သိပ်ထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးလို့ ပြောလို့မရပေမယ့် Storage မလောက်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမယ့် နည်းပညာတစ်ခုခုပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်မိုက်တယ်လို့ပြောရပါမယ်။
နောက်တစ်ချက်က စွမ်းဆောင်ရည် နဲ့ လိုင်းဆွဲအားပါ။ Rumors တွေအရ ဒါကိုလည်း Samsung ကမြှင့်ထားမယ့်ပုံပဲဆိုတော့ ခါတိုင်းထက်လိုင်းဆွဲအားပိုကောင်းမယ်ဆိုရင် ဂိမ်းသမားတွေအတွက် မျှော်လင့်စရာတစ်ခုဖြစ်လာမှာသေချာပါတယ်။ ဇာတ်ကားတွေ ဗီဒီယိုတွေ Streaming ကြည့်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် ဒေါင်းလုပ်မြန်မြန်ဆွဲချင်တဲ့သူတွေအတွက် သူ့ရဲ့ Buffer/ Download Speed က တော်တော်ကြမ်းမယ့်ပုံပါပဲ။ Flagship စမတ်ဖုန်းစီးရီးသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့ အရင်ထက်မြှင့်ထားမှာ ကျိန်းသေပါပဲ။ ဒီအပိုင်းကတော့ ကျွန်တော်လည်း အရမ်းမျှော်လင့်ထားတဲ့အပိုင်းပါ။
ဆိုတော့ ဒီတစ်ခေါက်ထွက်မယ့် Galaxy Note စီးရီးသစ်အတွက် Samsung ကိုယ်တိုင်ကလည်း မျှော်လင့်ချက်အများကြီးပေးထားတယ်လို့ပြောရပါမယ်။ ဒီတော့ စမတ်ဖုန်းတစ်ချို့မှာ လက်ရှိကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို လာမယ့် သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်တော့မယ့် Note စီးရီးစမတ်ဖုန်းသစ်က ဖြေရှင်းပေးနိုင်မလား User Experience ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးထားမလားဆိုတာ အားလုံးက စိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်မျှော်နေကြပါပြီ။
နှဈစဉျဒီလိုအခြိနျကတော့ နာမညျကွီး Flagship ဖုနျးတှထှေကျလာတတျတဲ့အခြိနျပါ။ အနီးကပျဆုံးအခြိနျကိုပွောရရငျတော့ Samsung ရဲ့ Note Series အသဈ ထှကျတော့မယျ့အခြိနျပေါ့။ လာမယျ့ သွဂုတျလ ၉ရကျနမှေ့ာ ထှကျလာတော့မယျ့ Galaxy Note စီးရီးသဈနဲ့ပတျသကျပွီး ပွောကွတဲ့ ကောလဟလသတငျးတှကေလညျး အမြားကွီးပါပဲ။ ဒါတှအေပွငျကို Samsung ကိုယျတိုငျ အမွညျးအနနေဲ့ သဲလှနျစပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတှလေညျး ထှကျပွီးသားဆိုတော့ Galaxy Note စီးရီးသဈတှကေို ဘယျလိုအကောငျးဆုံးဖနျတီးထားမလဲဆိုတာ တျောတျောကွီးစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးလာပါပွီ။
စမတျဖုနျးတှနေဲ့ လူတှနေဲ့ တဈသားတညျးကနြတေဲ့ အခုခတျေမှာ စမတျဖုနျးမရှိရငျ အလုပျမတှငျတော့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဖုနျးကောငျးကောငျးတဈလုံးရှိဖို့က အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။ တဈနတေ့ာရဲ့အလုပျတှဖွေရှေငျးပေးတယျ၊ အပနျးပွစေတေယျဆိုတဲ့နရောမှာ စှမျးဆောငျရညျသာညံ့နရေငျ စိတျအနှောငျ့အယှကျပါဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။ ဒီတော့ စှမျးဆောငျရညျမွငျ့ စမတျဖုနျးတဈလုံးဖွဈဖို့ ရှိရမယျ့အဓိကအခကျြတှကေို အရငျကွညျ့ရအောငျ.
ဖုနျးကောငျးကောငျးတဈလုံးအနနေဲ့ ရှိသငျ့တဲ့တဈခကျြက တဈနလေုံ့း အေးဆေးသုံးလို့ရအောငျထိ အားကွာကွာခံဖို့ပါပဲ။ Samsung ကတော့ လာမယျ့ဖုနျးအသဈတှကေ တဈနကေု့နျကောငျးကောငျးအသုံးခံမယျလို့ သဲလှနျစပေးထားတဲ့အတှကျ သူ့ရဲ့ Battery Lifetime နဲ့ပတျသကျပွီး တျောတျောလေးမြှျောလငျ့မိပါတယျ။
ဒါ့ပွငျ Storage နဲ့ပတျသကျတဲ့ ပွဿနာတှကေငျးဝေးသှားမယျလို့ သဲလှနျစပေးထားတာကတော့ နညျးနညျလေး ပိုစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးသှားပါပွီ။ Storage ပမာဏပဲ ပိုမြားလာမှာလား ဒါဆိုရငျတော့ သိပျထူးထူးဆနျးဆနျးကွီးလို့ ပွောလို့မရပမေယျ့ Storage မလောကျတဲ့ပွဿနာကိုဖွရှေငျးပေးမယျ့ နညျးပညာတဈခုခုပါဝငျလာမယျဆိုရငျတော့ တျောတျောမိုကျတယျလို့ပွောရပါမယျ။
နောကျတဈခကျြက စှမျးဆောငျရညျ နဲ့ လိုငျးဆှဲအားပါ။ Rumors တှအေရ ဒါကိုလညျး Samsung ကမွှငျ့ထားမယျ့ပုံပဲဆိုတော့ ခါတိုငျးထကျလိုငျးဆှဲအားပိုကောငျးမယျဆိုရငျ ဂိမျးသမားတှအေတှကျ မြှျောလငျ့စရာတဈခုဖွဈလာမှာသခြောပါတယျ။ ဇာတျကားတှေ ဗီဒီယိုတှေ Streaming ကွညျ့တတျတဲ့သူတှအေတှကျ ဒေါငျးလုပျမွနျမွနျဆှဲခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ သူ့ရဲ့ Buffer/ Download Speed က တျောတျောကွမျးမယျ့ပုံပါပဲ။ Flagship စမတျဖုနျးစီးရီးသဈဖွဈတဲ့အတှကျ စှမျးဆောငျရညျကတော့ အရငျထကျမွှငျ့ထားမှာ ကြိနျးသပေါပဲ။ ဒီအပိုငျးကတော့ ကြှနျတျောလညျး အရမျးမြှျောလငျ့ထားတဲ့အပိုငျးပါ။
ဆိုတော့ ဒီတဈခေါကျထှကျမယျ့ Galaxy Note စီးရီးသဈအတှကျ Samsung ကိုယျတိုငျကလညျး မြှျောလငျ့ခကျြအမြားကွီးပေးထားတယျလို့ပွောရပါမယျ။ ဒီတော့ စမတျဖုနျးတဈခြို့မှာ လကျရှိကွုံနရေတဲ့ အခကျအခဲတှကေို လာမယျ့ သွဂုတျလ ၉ ရကျနမှေ့ာမိတျဆကျတော့မယျ့ Note စီးရီးစမတျဖုနျးသဈက ဖွရှေငျးပေးနိုငျမလား User Experience ကိုအကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ မွှငျ့တငျပေးထားမလားဆိုတာ အားလုံးက စိတျဝငျတစားနဲ့စောငျ့မြှျောနကွေပါပွီ။